Fisafidianana lohahevitra 10 maimaimpoana mamaly WordPress | Famoronana an-tserasera
Melisa Perrotta | | Graphic Design, lohahevitra, Wordpress
Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha momba ny fampianarana momba ny WordPress ho an'ny vao manomboka, dia nohazavainay ny maha-zava-dehibe an'io sehatra io. Androany 28% amin'ireo tranonkala no noforonina sy / na novolavolaina tamin'ny WordPress. Ity tarehimarika mampivarahontsana ity dia mahatonga antsika hieritreritra ny fahafahan'ny asa misokatra eo amin'ny tsena sary.
Noho io antony io dia nanapa-kevitra ny hanangona izahay Lohahevitra 10 mahaliana mamaly WordPress. Ireo endrika rehetra ireo dia mampiseho fomba mifanaraka amin'ny fironana lehibe indrindra ankehitriny.
Mba hahazoana ireo lohahevitra mahafinaritra ireo tsindrio ny lohateny. Izy io dia hitarika anao mankany amin'ny pejy fisintomana. Ankafizo!
7 Aelezo ny
10 ho tsinontsinona
Ildy dia pejy misy votoatiny mamirapiratra miorina amin'ny rafitra Bootstrap. Pejy ity tena mandray andraikitra, finday ary sariaka. Ny lohahevitra dia tonga lafatra ho an'ny tranokala, pejy fandraisana, portfolio, ary tranokala famoronana.
Lohahevitra WordPress iray pejy be fampiasa indrindra miaraka amina endriny tena mandaitra. Dia a modely tena mandroso satria manana safidy isan-karazany. Ity lohahevitra ity dia miaraka amina widgets an-trano maro izay azo ampiasaina hanampiana portfolio, fijoroana vavolombelona, ​​fivoriana paralaks, fampahalalana momba ny vokatra, antso ho amin'ny hetsika ary maro hafa.
Manolotra MedZone fanaingoana isaky ny Widget WordPress; izay midika fa afaka manampy famolavolana miavaka amin'ny faritra fikarohana, kalandrie, bokotra ary maro hafa ianao. Ny widget tsirairay dia manana fomba amam-panao mba hahazoana antoka fa ny singa dia mety amin'ny tranokalanao.
Stanley dia lohahevitra natsangana tao amin'ny Bootsrap 4 namboarina ho an'ny WordPress. Ity modely ala-Twitter ity mamela ny safidy manokana sy ny fanaovana paositra karazana portfolio. Izy io koa dia misy modely pejy 3 sy famolavolana mamaly.
Vantage dia maodelim-panafody maroloko. Ny tanjany dia ny fampidirana mahery azy eo anelanelan'ny plugins toy ny Page Builder ho an'ny fametrahana pejy mamaly, Smart Builder 3 ho an'ny slider tsara tarehy, ary WooCommerce hanampy anao hivarotra an-tserasera. Modely vonona retina vonona hamaly tanteraka ity.
Ny lohahevitra Sydnety dia natokana ho an'ireo orinasa sy mpiasa tsy miankina izay te-hanana fanatrehana an-tserasera. Ny fanaingoana ny safidy dia mivelatra tokoa, misy safidy ho an'ny Google Fonts, famoahana logo ary maro hafa. Manana a slider pejy feno, ny teti-pitetezana dia manampy ny mpampiasa hitety ny pejy iray manontolo. Mamaly ny modely ary misy mihoatra ny Endritsoratra 600 avy amin'ny Google Fonts avy izay hisafidianana. Vonona ihany koa ny fandikan-teny ary miaraka amin'ny paralaks namboarina.
Radiate dia lohahevitra WordPress mamaly, miaraka amina foto-kevitra tena madio amin'ny bilaogy. Ity lohahevitra ity dia manohana sary paralaks cebecera. Izy io koa dia mampifangaro ireo safidy loko ao amin'ny pejy mpandoka izay mamela anao hitantana ireo sary masina sy rohy rehetra ao amin'ny tranokalanao. Izy io koa dia ahafahanao manova ny endriny manontolo amin'ny pejinao amin'ny fampiasana CSS. Azonao atao ny mampiditra ambadika manokana, fizarana pejy voalohany, faritra misy ny widget, sns.
Hueman dia lohahevitra ho an'ireo tranonkala mitaky fidirana tsy tapaka na mety amin'ny magazine an-tserasera. Noforonina tamin'ny zana-tsanganana efatra, mamela ny fampidirana lahatsoratra sy sary, ary koa manana fizarana media sosialy manan-danja.
Minamaze dia kinova maimaimpoana amin'ny lohahevitra matihanina marobe (Minamaza Pro). Lohahevitry ny hevitra ho an'ny tranonkala na karazana bilaogy izany. Ny môdely dia manana lamina mamaly, voaomana amin'ny HD retina ary manana tontonana safidy lohahevitra mahery vaika izay mamela anao hanao fanovana tsy misy kaody fanovana. Ny lohahevitra koa dia miaraka amin'ny slider mora ampiasaina.
Esteem dia lohahevitra WordPress multi-tsotra sy madio be dia be tonga lafatra amin'ny tranokala, portfolio, bilaogy, Sns Ity lohahevitra ity dia manohana lohateny, background ary widget izay azo ovaina, miaraka amin'ny modely pejy ihany koa izy ary manana tontonana safidy hanamboarana ny loko voalohany, ny sary famantarana ny tranokala, ny slider, ny sidebar ary ny karazana bilaogy 3. Izy io koa dia mifanentana tanteraka amin'ireo plugins malaza toa ny Form Form 7, WP PageNavi, ary Breadcrumb Navxt.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Fisafidianana lohahevitra WordPress maimaimpoana 10 maimaimpoana
Kernit, endritsoratra maimaimpoana aingam-panahy avy amin'i Jim Henson lehibe